Best Colored Contacts: benefits of coconut oil body massage
benefits of coconut oil body massage Uwoyela kakhukhunathi liyaziwa amafutha ayo enempilo eligcwele , awo nakakhulu ngawe njengoba injalo iluhlaza . Uwoyela kakhukhunathi kuba i amafutha ezidliwayo ekhishwe ikhenela noma inyama ka ukhukhunathi ukuvuthwa kuso kuvuna kusukela palm kakhukhunathi . It has izicelo ahlukahlukene ukudla , imithi , nezimboni
Uwoyela kakhukhunathi bavame Ufika namedropped njengoba yamuva super - enhle - for - wena umkhiqizo isimangaliso . Ucwaningo abanawo khombisa ukuthi ukuthathwa amafutha kakhukhunathi kungasiza imizimba yethu ukhweze ukumelana kokubili amagciwane namagciwane ezingaba ukugula . Nakakhulu , liphinde kungasiza ukulwa off imvubelo , isikhunta ne Candida .
Umsoco in uwoyela kakhukhunathi :
MCT medium - chain triglyceride
Impilo kanye ukuphulukisa izinzuzo uwoyela kakhukhunathi :
Uwoyela kakhukhunathi angase ngcono insulin uzwela glucose ukubekezelelana phezu kwesikhathi . Kuyasiza ekulawuleni amazinga kashukela futhi zivikela ukumelana insulin it kungasiza ngisho ukuvimbela Type II Diabetes .
Uwoyela kakhukhunathi ngamafutha kumnandi kakhulu . Iphunga okungokwemvelo kakhukhunathi ubuye kuzolise kakhulu . Ungakwazi amafutha kusebenza ikhanda lakho futhi gentlly uligcoba ukusiza ukususa ukukhathala kwengqondo .
Laurid acid is ibe monolaurin emzimbeni . Lokhu bangase ukucekela izifo ezibangelwa amagciwane kanye amagciwane afana yisimungumungwana , umkhuhlane , isifo sokusha kwesibindi kohlobo C ngisho HIV . Monolaurin kungase futhi ukuqeda ngonyawo Athlete sika .
Uwoyela kakhukhunathi kungenye yezindlela ezingcono ukunikeza umsoco ukuze izinwele zakho . Amaqatha acid isimo ngokujulile kusukela insides ye imicu out . Ukuhlinzeka amaprotheni , ususe dandruff kanye ekusizeni in kabusha kukhula . Abantu abaningi basebenzisa njengelungelo conditioner !
Amaqatha acid in Coconut Oil bulala Candida ( imvubelo overgrowth ) , okuyinto kubangela kwesisindo izifiso carbohydrate kanye ukukhathala . Benza uqamba kugaywe kalula futhi iguqulwe ibe amandla , esiza ukusheshisa umzimba nokusiza ashise fat egciniwe .
I fat in uwoyela kakhukhunathi ayinayo nomphumela omubi cholesterol . Empeleni , kuyasiza ngcono iphrofayli yakho cholesterol , ukuvimbela senhliziyo kanye nesifo sohlangothi kanti bangase elapha ngisho nesifo senhliziyo .
I eliyingqayizivele amafutha ayegcwele samafutha kakhukhunathi ziqukethe , anti - virus , anti - fungal , properties elwa namagciwane anti - yisinanakazana ezisiza ukuqinisa amasosha omzimba . Zidle uwoyela kakhukhunathi njalo kuyokwenza ukunciphisa zivame zokugula .
MCT inhlayiyana uwoyela kakhukhunathi incane ngakho basuke kugaywe kalula nge umthwalo kancane n kwamanyikwe nesimiso wokugaya ukudla . Abantu abaphethwe isifo sikashukela , ukukhuluphala ngokweqile , isifo gallbladder noma isifo Crohn bangase bazuze kakhulu amafutha kakhukhunathi .
I MCT in Coconut uwoyela isenzo njengendlela yemvelo sesikhumba conditioner . Engena ngokujulile futhi asenze zona , ukuvikela umonakalo kwemvelo mahhala emikhulu . Iphinde kusiza anti - yokuguga , eczema ngisho inikeza ezinye ukuvikelwa ilanga .
Izincwadi isikisela ukuthi amafutha kakhukhunathi iphephile ngempela badle imali ezifanele . Nakuba kungekho Ucwaningo lehlelekile uye sesizicabangile out semali ngqo ngokwenzuzo ezifanele , kubonakala eyodwa kuya amabili wezipuni ngosuku kungazuzisa . Icebiso : organic , ungafundeki , abandayo - sicindezelwe amafutha kakhukhunathi Thenga .
Diposting oleh Lisa Fernandez di 00.17